Mbido edemede na Yoast's WordPress SEO | Martech Zone
N'oge na-adịghị anya, anyị kesara otu anyị nwere Mbido edemede na saịtị anyị. Onye edemede aburula uzo di nkpa, na-abawanye pịa-site na udu na nsonaazụ ọchụchọ engine nke nwere snippet bara ụba, na ịba ụba na ọ ga-ekwe omume na saịtị WordPress gị ga-aga nke ọma.
Enweghi mmepe dị mkpa taa iji mee ka ndị ode akwụkwọ nwee ekele maka ụfọdụ ndị edemede ngwa ngwa dị n'ebe ahụ Joost De Valk. Igodo nke usoro a nke na-enyere onye edemede aka bụ na m na-elekwasị anya na saịtị ọtụtụ ndị dere, ọ bụghị saịtị ndị ọrụ otu (nke dị mfe iji kwado).
Enwere Ihe ntinye ikike maka WordPress, ma anyị ji obi eziokwu na-amasị ịgwakọta Yoast's WordPress SEO ngwa mgbakwunye ya na isiokwu anyi. Nke a bụ otu:
Wụnye ma gbanye Yoast's WordPress SEO ngwa mgbakwunye. Nke a ga - enyere ndị mmadụ aka na ngalaba mmekọrịta gị na ibe profaịlụ gị ma mee ka usoro atụmatụ dị mkpa nke Google ghagidere.
Jide n'aka na inwere onye ode akwukwo ebiputara na nke obula n’ime ihe omuma gi na ibe akwukwo. Nwere ike ịhụ koodu dị mkpa na post anyị na otu esi eme ya Mbido edemede na saịtị anyị.
Zụlite ihe ndị dere peeji na ndebiri gị ka ndị ọbịa wee hụ ndị edemede niile na blọọgụ gị. Anyị na-eme ụfọdụ nzacha ọzọ iji hụ na ha ezipụla otu ugboro n'afọ gara aga.
Mepụta ibe profaịlụ onye edemede, dika nke m - Douglas Karr. Anyị na-achọ ibipụta ozi profaịlụ nke onye ọrụ ha yana njikọ ha niile. Njikọ Google+ bụ isi ebe a - ọ na-ebipụta ihe dị mkpa iji mepụta mmekọrịta dị n'etiti onye edemede na profaịlụ.
Mee ka ndị edemede gị mejupụta ha URL profaịlụ Google+ na profaịlụ ọrụ WP ha.
Mee ka ndị edemede gị tinye blog na ha Google+ profaịlụ na Onye nkenye ngalaba.
Nwalee onye dere peeji nke Nhazi data nyocha nke Google ngwaọrụ.
Otu ihe edetu ikpeazụ… ọbụlagodi na ngwa nyocha ahụ na-egosi na ihe niile dị mma, ọ ka nwere ike ịchọ oge ụfọdụ iji hụ foto profaịlụ gị na nsonaazụ ahụ.
Tags: onye edemedeedemedeWordPress edemedewordPress odee ngwa mgbakwunyeyoast